रोचक – Dainik Samchar
May232022 by adminNo Comments
काठमाडौँ । नूनको प्रयोगसहित गरिने केही उपायले घरका सदस्यको सोँच नै सकारात्मक हुन्छ। नूनले खानाको स्वाद मात्र बढाउने होइन यसले बास्तु दोष पनि कटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। बास्तु शास्त्रमा जीवनलाई सुखी र समृद्धशाली बनाउने अचूक उपायहरुको उल्लेख गरिएको छ। नूनले खानाको स्वाद बढाउन मात्र होइन तपाइँको भाग्य पनि चम्काउन सक्छ भन्ने चाँहि थाह नहुन सक्छ। तपाइँको घरमा बास्तुदोष छ भने त्यसको उपचार केवल केही कचौरा नूनले गर्न सकिन्छ। तर यस्तो नून भने समुन्द्री नून नै हुनु पर्छ। बाथरुममा केही कचौरा नून राख्नुस् तपाइँको घरमा रहेको बास्तु दोष मेटिन्छ। तर हरेक महिना कचौरामा रहेको नून परिवर्तन गर्नु पर्छ। हाम्रो वरपर सकारात्मक र नकारात्मक गरी २ प्रकारका शक्ति हुन्छन्। यसको प्रभाव हाम्रो जीवनमा सिधा पर्छ। बास्तु शास्त्र यही सिद्धान्तमा आधारित छ। घरमा धेरै सदस्यको सोंच नकारात्मक छ भने सो घरमा शान्ति ह
May222022 by adminNo Comments
बलिउडका निकै रुचाइएका जोडी ऐश्वर्या राय र अभिषेक बच्चनको केमिस्ट्री सबैलाई मनपर्छ, यी दुईबीच वर्षौंदेखि उत्कृष्ट सम्बन्ध देखिएको छ । तर श्रीमान्–श्रीमतीबीचको एउटा सिक्रेट अभिषेक बच्चनले एउटा अन्तरवार्तामा खुलाएका छन् । वास्तवमा केही वर्ष अघि ऐश्वर्या राय बच्चन र अभिषेक बच्चन एउटा अन्तरवार्तामा उपस्थित भएका थिए । इन्डिया डटकमको खबर अनुसार यसै अन्तरवार्तामा अभिषेक बच्चनले आफ्नो वैवाहिक जीवनको विषयमा रोचक तथ्य खुलाएका थिए । उक्त कुराकानीमा यो जोडीले आफ्नो पनि अन्य जोडीको जस्तै थुप्रै बहस हुने गरेको स्वीकार गरे । ऐश्वर्याले पनि यसबारे कुरा गर्दै अभिषेक र आफूबीच कुनै न कुनै कुरामा ठाकठुक परिहाल्ने बताइन् । तर यसलाई उनले झगडा नभई असहमति बताएकी थिइन् । उनले भनिन्- ‘यस्सो ठाकठुक भएन भने त जीवन बोर भइहाल्छ नि ।’ यो कुराकानीमा अभिषेकले आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई सही तरिकाले चलाउनका लागि एउटा
काठमाडौँ । किशोरी अवस्थामा समस्या धेरै प्रकारका हुन्छन्। किशोर अवस्था महिलाका लागि संवेदनशील समय पनि हो। यो बेला शारीरिक र मानसिक सबै खाले परिवर्तन हुन्छ। यो अवस्थामा शरीरका बिभिन्न अंगमा समेत परिवर्तन आउँछ। शरीरमा जुन खालका परिवर्तन आउँछन् त्यसले थुप्रै खालका समस्याहरु समेत निम्त्याउने गर्दछ। महिनावारी हुँदा तल्लो पेट र ढाड दुख्नु सामान्य नै मानिन्छ। महिनावारी हुनुभन्दा केही दिन पहिले शरीरमा भएको रागरसको मात्रामा परिवर्तन आउने गर्दछ। यस्तो रागरसको सहयोगले बच्चा हुर्कनका लागि पाठेघरको भित्र उपयुक्त वातावरण बनिरहेको हुन्छ । यस प्रक्रियाका कारणले पनि तल्लो पेट र ढाड दुख्ने गर्दछ। यदि पाठेघरले निषेचित डिम्ब प्राप्त गरेन भने त्यो निर्माण भएको रगतको तह विस्तारै रगतका रूपमा योनिमार्ग हुदै बाहिर निस्कन्छ र यस बेला पाठेघर खुम्चिने र फुक्ने हुदा यस्तो प्रकारको दुखाइ हुने गर्दछ। यही र
चिनमा एक अचम्मको घटना घटेको छ ।विवाहमा महिलाले भित्रि लाउने ब्रा सानो किनिदिएको भन्दै महिलाले सम्बन्ध वि’च्छे’दको माग गरेकी छिन् । उनीहरुको विवाह भएको ११ घण्टा समेत पुग्न नपाउदै ति महिलाले सम्बन्ध वि’च्छे’दको माग गरेको समाचारमा भनिएको छ । ति केटीले आफुले लाउने भित्रि लुगा ब्रा’को साईज थाहाँ हुदा हुदा पनि आफ्नो अप’मान गरी सानो ब्रा किनिदिएको आरोप लगाउदै ति महिलाले सम्बन्ध वि’चछे’दको माग गरेको बताइएको छ । उनीहरु दुवै जनाले का’नुनी विवाह पहिल्यै नै गरिसकेको थियो । भने चिनको त्यो ठाउँको संस्कार अनुसार भर्खरै मात्र विवाह भएको छ । गु’इझाओ प्रा’न्तमा रि’त अनुसार विवाह गरेको ११ घण्टा नपुग्दै याङ र बेहुली लुओबीच वि’वाद च’र्किएको हो । विवाहमा भि’त्री व’स्त्र कि’निदिने उनीहरुको सं’स्कार च’लन रहेको बताइएको छ । लु’ओले ब्रा’को सा’इज सा’नो भएको ब’ताएपछि या’ङले विवाह ग’र्न मन छैन भने पैसा फि’र
राम्रो पढ्छु, आफ्ना खुट्टामा आफैँ उभिन्छु, जीवनमा केही गर्नु छ, पुरूष भन्दा महिला कम हुनुहुँदैन, अरूसित आश्रित हुनुहुँदैन, आश्रित भयो भने हेप्छन् ।’ अहिलेका प्राय सबै महिलाहरू यसै भन्छन् । तर विडम्बना के छ भने पुरूष भन्दा महिला कम्जाेर नभए पनि श्रीमान भन्दा श्रीमती चाहिँ किन कम्जाेर नै हुन्छन् । महिला पुरुष एक रथको दुई पाङ्ग्रा हुँदा श्रीमान् र श्रीमती चाहिँ एक रथको दुई पाङ्ग्रा भएकाे खासै देखिँदैन। पुरुष भन्दा महिला कम्जोर भन्न कसैले पनि रुचाउँदैनन्, महिलाहरू कमजोर भन्न पनि मिल्दैन । वास्तवमै महिला कम्जोर हुने पनि होइनन्, कम्जोर बनाइने हो । तर कसले ? समय, परिस्थिति, पुरुष, दोस्री महिला वा आफैले महिलालाई कम्जोर बनाउँदै छन् ? यो प्रश्नको जवाफ त्यति सजिलो छैन । खासमा भन्नु पर्दा पुरूषकाे विभिन्न कम्जाेरीले नै महिलाहरू कम्जाेर हुने गरेका छन् । पुरुषहरूकाे एकाधिकारवादी संकिर्ण सोच र स
छोरीले विवाहको मण्डपमा विवाह गर्न नमानेपछि वि’धवा आमाले गरिन् ज्वाईसँग विवाह
घोर कलियुग ! छोरीले विवाहको मण्डपमा विवाह गर्न नमानेपछि आमाले गरिन् ज्वाईसँग विवाह काठमाडौ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा हरेक दिन नयाँ र फरक घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । यो बिचमा उत्तर प्रदेशस्थित कानपूर जिल्लामा अधबैंसे दुलाहा (बेहुला) लाई देखेपछि दुलही (बेहुली) ले विवाह गर्न अस्विकार गरेको खबर आएको छ । भारतीय मिडियाका अनुसार दुलहीले दुलहातर्फ माला फ्याँक्दै चिच्याउँदै भनिन्, ‘ममाथि धोका भएको छ ।’ समाचार अनुसार दुलहीको यस्तो व्यवहार देखेपछि त्यहाँ उपस्थित पाहुना, जन्ती अचम्मित भए । त्यतिबेला आमाले छोरीलाई ठूलो दबाब दिइन् तर उनले मानिनन् । रिपोर्टका अनुसार निकै सम्झाएपछि पनि जब छोरी मानिनन् तब दुलहीकी आमा नै दुलहासँग आगरा गइन् । १७ वर्षीया दुलहीले यसै वर्ष १२ कक्षाको परीक्षा दिएकी छिन् । ती युवतीकी आमाले आगरामा बस्ने आफ्नी काकीकी नन्दका छोरासँग उनको सम्बन्ध तय गरेकी थिइन् । मार्
काठमाडौँ । खुट्टाको न शा फुल्ने स-मस्या (भेरिकोज भेन) धेरैलाई हुन्छ। खुट्टामा न,शा फुल्दै गएपछि त्यसले खुट्टाको स्वरुप नै खराब देखिन्छ। यसरी न,शा सुन्निनु भनेको न,शाहरु काम नलाग्ने हुनु हो। यस्तो स-मस्याको समाधान गर्न अहिले सजिलो विधिबाट उपचार गरिन्छ। खुट्टाको न,शा फुल्ने स-मस्याको उपचारमा सबैभन्दा भरपर्दो र उ’च्च गुणस्तरीय प्रविधिलाई ‘रे’डियोफ्रिक्वेन्सी एबलेसन’ भनिन्छ। धुलिखेल अ-स्पतालमा सन् २०१३ अगस्टबाट सेवा सुरु गरेपछि हालसम्म चार सयभन्दा बढी बिरामीले रेडियोफ्रिक्वेन्सी एबलेसन गराइसकेका छन्। विभिन्न चरणमा गरिएका अध्यनन अनुसार रेडियोफ्रिक्वेन्सी एबलेसन गराएका बि’रामीमा फेरि न,शा सुन्निने स-मस्या दोहोरिएको पाइएको छैन। कसरी हुन्छ रेडियोफ्रिक्वेन्सी एबलेसन ? यो एक प्रकारको श”ल्यक्रिया नै हो। जसमा भेरिकोज भेन (नशा सुन्निएको) भएको खुट्टालाई पूरै अथवा आंशिक रुपमा केही समयका लागि बेह
काठमाडौँ । अनुहार चम्काउन मानिसले निकै रकम खर्च गर्छन्। व्युटी पार्लर, चिकित्सक लगायतका धाउँदा धाउँदा पनि अनुहारमा चमक आउँदैन। तर कतिपय यस्ता सामाग्री र प्रयोगहरुलेपनि मानिसका छालामा प्रतिकुल असर पर्ने गरेका छन्। तर साइड इफेक्ट नहुने गरि घरमै पनि सौन्दर्यका विभिन्न तरिकाहरु अपनाउन सकिन्छ। जसले अनुहार चमकाउन मद्दत गर्छ। एक चम्चा मह अनुहारमा लगाउने (यसमा ४–५ थोपा कागतीको रस मिलाउन सकिन्छ ।) १५ मिनेटमा अनुहार पखाल्दा चमक आउँछ।दुई चम्चा बेसनमा आधा चम्चा बेसार मिलाउने । त्यसलाई १० थोपा गुलाबजल र कागतीको रसले लेदो बनाउने। सो लेदोमा काचो दूध घोलेर पातलो लेप बनाउने र अनुहारमा लगाउने । करीब २० मिनेटपछि अनुहार पखाल्ने। हप्तामा एकपटक यो तरिका अपनाउँदा अनुहारमा चमक आउँछ। पाकेको केरा मुछेर अनुहारमा लगाउँदा चाउरीपन हटाउँछ र छालालाई कसिलो बनाउँछ।डार्कसर्कल हटाउन आँखाको वरिपरी काँचो आलुको टुक्
साउथका यी अभिनेत्रीहरु जस्ले सुन्दर देखिनको लागि प्लास्टिक सर्जरी गरे
एजेन्सी : सुन्दर देखिन बलिउडको अभिनेत्रीहरूले प्लास्टिक सर्जरी गर्छन् भन्ने धेरैलाई थाहा छ। तर सुन्दर देखिन सर्जरी गर्ने दक्षिण भारतीय अभिनेत्रीहरूको पनि कमी छैन। उनीहरू पनि आफूलाई आकर्षक देखाउन विभिन्न किसिमका प्लास्टिक सर्जरी गर्छन्। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री नयनतारादेखि लिएर कीर्ति सुरेशसम्मले प्लास्टिक सर्जरी गरेका छन्। यो भिडबाट धेरै टाढा छिन् दक्षिण भारतीय अभिनेत्री साई पल्लवी। उनी मेकअप गर्न समेत रुचाउँदिनन्।प्लास्टिक सर्जरी गर्ने दक्षिण भारतीय अभिनेत्रीहरूको चर्चा गरौँ- कीर्ति सुरेश अभिनेत्री कीर्ति सुरेशले हालै प्लास्टिक सर्जरी गरेकी छन्। उनले प्रदर्शनरत फिल्म ‘सरकारु वारी पाटा’ प्रदर्शन हुनुभन्दा अगाडि ओठको सर्जरी गरेकी हुन्। फिल्ममा उनीसँगै महेश बाबुको मुख्य भूमिका छ। नयनतारा तमिल फिल्मकी अभिनेत्री नयनताराले आफ्नो लुकमा निकै परिवर्तन ल्याएकी छन्। उनले आफूलाई आकर्ष
May172022 by adminNo Comments
९९ प्रतिशतले दिए गलत जवाफ, यी हट सुन्दरीको उमेर कति हो ?
भन्छन् महिलाको उमेर र पुरुषको तलब सोध्नु हुँदैन् ।तर यी कुराहरुको जानकारी नहुँदा कहिलेकाँही धोका खानुपर्ने अवस्था आउँछ ।कोही मान्छे उमेर बढ्दा पनि जवान देखिन्छन्, कोही कम कम उमेरमा पनि बुढो । तर अहिले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो उमेरभन्दा निकै जवान देखिने एक मोडलको भिडियो भाइरल भइरहेको छ । उनको वास्तविक उमेर थाहा पाएर फ्यानहरु छक्क परेका छन् ।जब यी मोडलले आफ्नो वास्तविक उमेर सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूलाई खुलासा बताइन्, उनीहरू छक्क परे । हालै एउटा पोष्ट गरेकी छिन्, जसमा उनले लेखेकी छिन्, ‘मानिसहरूले मलाई मेरो उमेर नभनेसम्म मात्र माया गर्छन् मोडलका अनुसार धेरै पुरुषले उनीसँग डेटमा जाने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।तर जब उनलाई उनको उमेर थाहा हुन्छ, तब सबैले मात खान्छन् । मोडेल @princessaprilxo टिकटकमा निकै लोकप्रिय छिन् ।उनले हालै एउटा पोष्ट गरेकी छिन्, जसमा उनले लेखेकी छिन्, ‘मानिसहरूले मलाई म
उपमेयरमा जितेलगत्तै कोसँग बिहे गर्दै छिन् सुनिता डंगोलले ? (8395)
पुन्य गौतमले, बालेन शाह अमिरिकन एजेन्ट भएको खुलासा गरे, देखाए यस्तो प्रमाण (भिडियो सहित) (7203)